Darren Aronofsky ကို MPSE ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူဆုဖြင့်ချီးမြှင့်မည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » MPSE Filmmaker ဆုကိုဂုဏ်ပြုခံရဖို့ Darren Aronofsky
ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 များအတွက် 15 MPSE ရွှေ Reel ဆုပေးပွဲသတ်မှတ်မည်
စတူဒီယိုစီးတီး, ကာလီဖိုးနီးယား - အဆိုပါ Motion Picture အသံအယ်ဒီတာများ (MPSE) ယနေ့ကချီးမြှောက်မည်ကြေငြာခဲ့သည် အကယ်ဒမီဆုချီးမြှင့်၎င်း၏နှစ်ပတ်လည်နှင့်အတူ -nominated ဒါရိုက်တာ Darren Aronofsky ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ ဆုချီးမြှင့်။ ၏ဒါရိုက်တာ နောဧသည်, ငန်းနက်, အဆိုပါနပန်းသမားများအား နှင့်အခြားရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်ရုံ၏အနုပညာအားမိမိထူးချွန်ပံ့ပိုးမှုများကိုအသိအမှတ်ပြုလျက်ရှိသည်။ သူ 62 မှာဆုနှင့်အတူပေးအပ်ပါလိမ့်မည်nd MPSE ရွှေ Reel ဆုပေးပွဲဖေဖော်ဝါရီလ 15, 2015 အတွက် Los Angeles မြို့.
MPSE နိုင်ငံတော်သမ္မတဖရန့် Morrone သူ၏အလုပ်အားကြီးသောဖန်တီးမှုဗျာဒိတ်ရူပါရုံနှင့်ရဲရင့်အမြင်နှင့်အသံစတိုင်ထားပါတယ်မာစတာဇာတ်လမ်းတွေအဖြစ် Aronofsky ဖော်ပြခဲ့သည်။ "Darren Aronofsky ရဲ့ဇာတ်ကားတွေဟာသူတို့ရဲ့အရေးပါတဲ့ကောင်းချီးနှင့် Box Office ၏အောင်မြင်မှုအားဖြင့်သက်သေအဖြစ်စိန်ခေါ်မှုနှင့်ကျနော်တို့မှာအများကြီးဖျော်ဖြေမှုနှစ်ဦးစလုံးနေကြတယ်" ဟု Morrone ကဆိုသည်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂုဏ်သတင်းအဘို့သူ့ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်မိမိအအောင်မြင်မှုတွေကိုချီးမြှောက်ဖို့အလွန်အမင်း excitied များမှာ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ ဆုချီးမြှင့်။ "
Aronofsky "ကျွန်မဖြစ်လာမှမှုတ်သွင်းခဲ့သည်ကိုပထမဦးဆုံးအကြောင်းပြချက်တစ်ခုမှာပြောပါတယ် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ အသံနှင့်စမ်းသပ်၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်နိုင်ခြေခဲ့, ဒါကြောင့် MPSE ခြင်းဖြင့်ဂုဏ်ပြုခံရဖို့တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ခံစားမှုဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်မက်, အသံ Emotion နှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့အသံကအသံမကြာခဏငါ၏အမြည်းကိုကယ်တင်တော်မူ၏အရာဖြစ်တယ်။ "
အဆိုပါ MPSE ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ ဆုချီးမြှင့်ဇာတ်လမ်းပြောပြ၏ဝိညာဉ်သည်သန်စွမ်းခြင်းနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု embody သူကိုထူးခြားသောရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးဖို့တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆု၏ယခင်လက်ခံသူများဘရိုင်ယန် Grazer, စတီဗင်ပီးလ်ဘာ့ဂ်နဲ့အန်းလီကပါဝင်သည်။
Darren Aronofsky ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ရုပ်ရှင်, နောဧသည်, 2014 ၏မတ်လအတွင်းကျယ်ပြန့်ဝေဖန်ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုမှဖြန့်ချိခြင်းနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း $ 363 သန်းထိဝင်ငွေရရှိခဲ့ပြီးခဲ့သည်။ စယ် Crow, အန်သိုနီ Hopkins, ဂျနီဖာ Connelly နှင့်မင်းသမီး Emma Watson ဟာ Starring, ကနောဧသင်္ဘော၏ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပါတယ်။ ရစ်ချတ် Roeper "အစဉ်အဆက်ရုပ်ရှင်ပေါ်တွင်တင်အရှိဆုံးပြိုးပြိုးပြက်ပြက်နှင့်မမေ့နိုင်သောကျမ်းစာ Epic တဦး။ " သူကကိုခေါ် Aronofsky ရဲ့ယခင်ရုပ်ရှင်, ငန်းနက်, နာတာလီ Portman အဆိုပါအနိုင်ရ အကယ်ဒမီဆုချီးမြှင့် အကောင်းဆုံးမင်းသမီးနှင့်အကောင်းဆုံးရုပ်ပုံနှင့်အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆုအပါအဝင်လေးအပိုဆောင်းအဆိုပြု, ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါနပန်းသမားများအားဒီ Grand Prize အနိုင်ရသမိုင်းထဲမှာသာတတိယအမေရိကန်ရုပ်ရှင်အောင်, အလေးစားခံရသောရွှေခြင်္သေ့အနိုင်ရရှိရာ, 2008 ၌ထငျရှားသောအဆိုပါဗင်းနစ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာပြသဖို့။ အဆိုပါရုပ်ရှင်စပါးကိုရိတ် အကယ်ဒမီဆုချီးမြှင့် ကို Mickey Rourke နဲ့ Marisa Tomei နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်လျာထားခံရ, သူ၏အထင်ကရစွမ်းဆောင်မှုများအတွက်နှင့်သူ၏မူလလမ်းကြောင်းများအတွက်ဘရုစ် Springsteen များအတွက် Rourke အဘို့ရွှေကမ္ဘာလုံးအနိုင်ရ အဆိုပါနပန်းသမားများအား။ Aronofsky ရဲ့အစောပိုင်းခရက်ဒစ်ဟာကောင်းချီးရုပ်ရှင်ပါဝင်သည် အဆိုပါရေပန်း, အိပ်မက်အဘို့အ Requiem နှင့် π.
အဆိုပါ, 1953 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Motion Picture အသံအယ်ဒီတာများ အဆိုကိုပုံနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အလုပ်လုပ်သောသူပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံနဲ့ဂီတအယ်ဒီတာများ၏ non-အမြတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဖွဲ့အစည်းရဲ့မစ်ရှင်ရောနှော, တစ်ဦးချင်းစီ၏တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအုပ်စုပညာရှင်များအနိုင်ရဆုအနေဖြင့်လူငယ်များနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရှင်များအသိပညာတစ်ခုစည်းစိမ်ကိုပေးတျောမူ၏ လမ်းညွှန်နှင့်အသံနဲ့ဂီတတည်းဖြတ်ရေးအတွက်အနုပညာအရည်အချင်းကိုနှင့်နည်းပညာတိုးတက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီးရပ်ရွာပညာပေး; ပညာရေးအတွက်ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံအသံဆက်လက်တိုးဘို့ပေးပညာသင်ဆု; နှင့်ဤထူးခြားသောယာဉ်လေ့ကျင့်သူအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဝတွေကိုမြှင့်တင်ရန်ကူညီပေးနေ။
audio ဆုပေးပွဲ အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင် mpse post ကိုထုတ်လုပ်မှု အသံက 2014-12-22
ယခင်: AbelCine 54th နှစ်မြောက် Extravaganza Continues အဖြစ် Miller ကကင်မရာပံ့ပိုးမှု, LLC LP သို့ '' 25 ဂန္ထဝင် tripod တစ်ဦးက New Winner ကြေညာ
နောက်တစ်ခု: Yu + ပူးတွဲရန်း Park ရဲ့ NYELA များအတွက် 22-ပုံပြင် Projection မြေပုံအံ့မခန်းဖန်တီးလိုက်တဲ့